Aza Manary Toky Mihitsy! Manàna Faharetana! | Fianarana
Tsy Misy na Inona na Inona Mahatafintohina An’ireo Tia An’i Jehovah
Manana “Fo Mahalala” An’i Jehovah ve Ianao?
Inona no Tokony Hataon’ireo “Mahalala An’Andriamanitra”?
Mahazo Fampaherezana Isika ka Mampahery ny Hafa
Jehovah no Fonenantsika
Omeo Voninahitra ny Anaran’i Jehovah
I Josèphe Tokoa ve no Nanoratra Azy Io?
Aza Manary Toky Mihitsy!
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Kwangali Kwanyama Letonianina Litoanianina Luo Malagasy Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Ndebele Ndonga Norvezianina Nzema Népali Oromo Ouzbek Pangasinan Poloney Portogey Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Venda Vietnamianina Waray-Waray Wolaita Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Ny Tilikambo Fiambenana—Fianarana | Martsa 2013
Efa Vavolombelon’i Jehovah nandritra ny taona maro ve ianao, ary malahelo satria mba tianao hanompo an’i Jehovah ny vadinao?
Sa kivy ianao satria nanana mpianatra Baiboly toa liana be, nefa avy eo izy tsy nandray ny fahamarinana akory?
Misy tantara avy any Grande-Bretagne ireto, hanampy anao hahita hoe nahoana ianao no tsy tokony hanary toky mihitsy. Ho hitanao koa fa misy zavatra azonao atao, mba hanampiana ny hafa handray ny fahamarinana. Milaza mantsy ny Baiboly hoe: “Alefaso eny ambony rano ny mofonao, fa ho hitanao indray izy rehefa afaka andro maro.”—Mpito. 11:1.
TOHIZO FOANA NY FANOMPOANAO AN’I JEHOVAH
Mila manaraka foana ny fahamarinana ianao, ary mifikitra amin’i Jehovah, raha tianao hanompo an’i Jehovah ny vadinao. (Deot. 10:20) Izany no nataon’i Georgina. Tezitra be i Kyriacos vadiny, tamin’izy nanomboka nianatra Baiboly tamin’ny Vavolombelon’i Jehovah, tamin’ny 1970. Nataon’ny vadiny izay tsy hianarany intsony. Tsy navelany hiditra ny trano koa ireo Vavolombelona, ary nariany izay bokintsika hitany tao an-trano.
Vao mainka tezitra i Kyriacos rehefa nivory i Georgina. Tonga tany amin’ny Efitrano Fanjakana izy indray mandeha mba hanakorontana. Hitan’ny anabavy iray fa ny teny grika no hain’i Kyriacos kokoa noho ny teny anglisy, ka niantso an-telefaonina rahalahy grika iray tany amin’ny fiangonana hafa izy mba hampitony azy. Nitony i Kyriacos satria tsara fanahy ilay rahalahy. Nanaiky hianatra Baiboly taminy mihitsy aza izy! Nijanona anefa izy volana vitsivitsy tatỳ aoriana.
Mbola nanohitra foana i Kyriacos telo taona tatỳ aoriana. Nilaza izy fa hilaozany i Georgina raha hatao batisa. Nivavaka mafy i Georgina tamin’ny andron’ny batisany hoe enga anie mba tsy handao azy ny vadiny. Rehefa haka an’i Georgina ho any amin’ny fivoriambe anefa ireo Vavolombelona, dia nilaza i Kyriacos hoe: “Tonga dia mandehana, fa hanaraka avy ato aoriana izahay handeha amin’ny fiaranay.” Nanatrika ny fandaharana maraina izy, ary nijery ny batisan’ny vadiny!
Nahita ny vadiny natao batisa i Georgina, 40 taona taorian’ny nihaonany voalohany tamin’ny Vavolombelon’i Jehovah
Nanao fiovana lehibe tsikelikely i Kyriacos taorian’izay. Natao batisa izy, 40 taona taorian’ny nihaonan’i Georgina voalohany tamin’ny Vavolombelona. Fa inona no nanampy azy? Hoy izy: “Tena faly aho hoe tsy nisy na inona na inona navelan’i Georgina hisakana azy tsy hanompo an’i Jehovah.” Hoy i Georgina: “Tsy nieritreritra ny hanajanona ny fanompoana an’Andriamanitra mihitsy aho, na dia teo aza ny fanoheran’ny vadiko. Nivavaka momba izany foana aho, ary tsy nanary toky mihitsy.”
MIEZAHA HITAFY NY TOETRA VAOVAO
Mila mitafy ny toetra vaovao koa ianao, raha tianao hanompo an’i Jehovah ny vadinao. Hoy ny apostoly Petera: “Maneke ny vadinareo mba ho voataonanareo tsy amin’ny teny izy, raha misy tsy mankatò ny teny masina, fa amin’ny fitondran-tena kosa.” (1 Pet. 3:1) Nampihatra izany i Christine, na dia taona maro tatỳ aoriana aza vao nandroso i John vadiny. Tsy nino an’Andriamanitra i John, 20 taona mahery lasa izay, tamin’i Christine lasa Vavolombelon’i Jehovah. Tsy te hiditra tamin’ny fivavahana i John, kanefa hitany fa tena sarobidy tamin’i Christine ilay fivavahany vaovao. Hoy izy: “Hitako hoe lasa falifaly izy. Vao mainka lasa azo ianteherana izy, ary tapa-kevitra hanao izay fantany fa tsara. Tena nanampy ahy izany rehefa tao anatin’ny sarotra.”
Tsy noteren’i Christine hanaiky ny fivavahany mihitsy ny vadiny. Niaiky i John hoe: “Takatr’i Christine hatramin’ny voalohany fa tsara kokoa raha tsy iresahana momba ny fivavahana aho. Nanam-paharetana izy, ka navelany aho hahalala ny marina fotsiny, arakaraka ny fandehan’ny fotoana.” Fantatr’i Christine fa liana amin’ny siansa sy ny natiora i John, ka rehefa nisy lahatsoratra momba izany tao amin’ny gazetintsika, dia nilazany i John hoe: “Mety hahaliana anao ity.”
Nisotro ronono i John tatỳ aoriana, ka nanomboka namboly teny an-jaridaina. Lasa nanam-potoana kokoa izy mba hisaintsainana an’ireo fanontaniana momba ny fiainana. Nieritreritra izy hoe: ‘Tongatonga ho azy teto an-tany ve isika, sa nisy antony namoronana antsika?’ Nisy rahalahy nanontany an’i John taorian’izay hoe sao dia te hianatra Baiboly izy. Nekeny ilay izy satria efa lasa nino an’Andriamanitra izy.
Soa ihany fa tsy nanary toky mihitsy i Christine! Nivavaka foana izy nandritra ny 20 taona hoe mba hanaiky ny fahamarinana ny vadiny, ka natao batisa ihany i John tamin’ny farany. Mazoto manompo an’i Jehovah izao izy mivady. Hoy i John: “Zavatra roa no tena nampiaiky ahy. Voalohany, tsara fanahy sy nandray ahy tsara ireo Vavolombelona. Faharoa, tena tsara ilay manana vady Vavolombelon’i Jehovah satria tsy mivadika izy, azo ianteherana, ary mahafoy tena.” Nampihatra ny 1 Petera 3:1 i Christine ka nisy vokany tsara!
NAMOA ILAY VOA TAONA MARO ATỲ AORIANA
Ahoana indray raha nisy olona nampianarinao Baiboly, nefa lasa tsy liana intsony? Hoy i Solomona Mpanjaka: “Mamafaza voa amin’ny maraina, ary aza atsahatra ny tananao mandra-paharivan’ny andro, satria tsy fantatrao izay ho vanona, na itsy na irỳ, na samy ho vanona izy roa.” (Mpito. 11:6) Taona maro atỳ aoriana vao mitsiry ny voan’ny fahamarinana indraindray. Mety ho lasa takatr’ilay olona amin’izay hoe ilaina ny manatona an’Andriamanitra. (Jak. 4:8) Tsy hampoizinao akory hoe namoa ny voa nafafinao!
Avy any Inde i Alice, ary nifindra any Angletera. Nanomboka nianatra Baiboly tamin’i Stella izy tamin’ny 1974. Miteny hindi izy, kanefa te hanatsara ny teny anglisiny. Nitohy nandritra ny taona vitsivitsy ny fianaran’i Alice, ary nivory tany amin’ny fiangonana miteny anglisy izy. Fantany fa fahamarinana ilay nianarany, saingy nataony toy ny fialam-boly fotsiny ilay izy. Tsy vitan’izay fa tia vola sy tia nanao fety koa izy. Tsy nianatra intsony àry i Alice tamin’ny farany.
Naharay taratasy avy tamin’i Alice i Stella, 30 taona tatỳ aoriana. Izao no voalaza tao: “Tena ho faly ianao raha ilazako fa natao batisa tamin’ny fivoriamben’ny vondrom-paritra vao haingana aho, ilay mpianatrao tamin’ny 1974. Tena nisy akony be teo amin’ny fiainako ny nataonao. Ianao no namafy ny voan’ny fahamarinana tato amiko, ary na dia mbola tsy vonona hanokan-tena ho an’Andriamanitra aza aho tamin’izany, dia notehiriziko tato am-poko sy tato an-tsaiko foana ilay voa nafafinao.”
Nanoratra toy izao tamin’i Stella i Alice: “Tena ho faly ianao raha ilazako fa natao batisa tamin’ny fivoriamben’ny vondrom-paritra vao haingana aho, ilay mpianatrao tamin’ny 1974”
Fa inona no nitranga? Nitantara i Alice fa ketraka be izy rehefa maty ny vadiny tamin’ny 1997. Nivavaka tamin’Andriamanitra àry izy. Folo minitra taorian’izay, dia nandondòna tao an-tranony ny Vavolombelona roa miteny pendjabi, ary nanolotra an’ilay taratasy mivalona hoe Manantena Inona ny Olon-tiana Nodimandry? Tsapan’i Alice fa valim-bavaka ilay izy, ka tapaka ny heviny fa hitady Vavolombelon’i Jehovah izy. Aiza anefa? Hitany tao amin’ny diary iray efa tonta ny adiresin’ny Efitrano Fanjakana misy ny fiangonana miteny pendjabi. Nankany àry izy, ary nandray azy tsara ireo rahalahy sy anabavy. Hoy i Alice: “Mbola tsapako foana ilay fitiavana nasehon’izy ireo tamiko, na dia rehefa nody aza aho, ary izany no nanamaivana ny foko.”
Nanomboka nivory tsy tapaka izy, ary niverina nianatra Baiboly. Nianatra nanoratra sy niteny pendjabi misosa tsara koa izy. Natao batisa izy tamin’ny 2003. Izao no namaranany an’ilay taratasy: “Misaotra betsaka anao nandatsaka ny voan’ny fahamarinana tato amiko, 29 taona lasa izay. Misaotra koa nanome ohatra tsara ho ahy.”
“Misaotra betsaka anao nandatsaka ny voan’ny fahamarinana tato amiko, 29 taona lasa izay. Misaotra koa nanome ohatra tsara ho ahy.”—Alice
Inona no ianaranao avy amin’ireo tantara ireo? Mety ho ela tsy araka ny ieritreretanao azy vao handroso ny olona iray. Avelan’i Jehovah hitombo ao am-pony ny voan’ny fahamarinana, rehefa tena mangetaheta ny fahamarinana izy, ary tso-po sy manetry tena. Tadidio ny tenin’i Jesosy hoe: “Maniry ilay voa ka mitombo, nefa tsy [fantatr’ilay mpamboly] hoe amin’ny fomba ahoana. Mamokatra tsikelikely amin’izao fotsiny ny tany: Voalohany, ny raviny toy ny ravin’ahitra, avy eo ny salohy, ary farany dia feno voa ny salohiny.” (Mar. 4:27, 28) Mandeha tsikelikely ilay fitomboana, ary mitombo “amin’izao fotsiny” ilay izy. Tsy fantatsika mpitory ny tena fomba itomboan’ilay voa, fa raha miezaka foana isika hamafy be, dia mety hijinja be.
Aza hadinoina koa ny herin’ny vavaka. Nivavaka tamin’i Jehovah foana i Georgina sy Christine. Raha ‘maharitra amin’ny vavaka’ ianao, ary tsy manary toky mihitsy, dia ho hitanao indray ilay ‘mofo’ nalefanao teny ambony rano, rehefa “afaka andro maro.”—Rom. 12:12; Mpito. 11:1.
NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Martsa 2013